Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu yeCarbide | Toonney
Le mikhiqizo yochungechunge ikakhulu imboza i-tungsten carbide ingenalutho, ibha eyisicefe ye-carbide, i-carbide yenza, namanye amathuluzi wokunemba. I-Toonney Tungsten Carbide Blank Plant, njengomunye wabakhiqizi abadumile be-carbide boring bar, uthole idumela elihle ekhaya nakwamanye amazwe. Kule minyaka, izinkampani ezingaphezulu kwamanye amazwe, ezahlukahluka embonini yemishini, embonini yezimoto, embonini yobunjiniyela njalonjalo, iya eToonney Tungsten Carbide Blank Plant ukuthola amathuluzi wokucacisa asezingeni eliphakeme, ibha ye-carbide eyisicefe, i-carbide preforms ngentengo yokuncintisana.
I-Tungsten carbide engenalutho esuka eToonney isitshalo se-tungsten carbide esingenalutho sinobukhulu obuhlukile. IToonney Factory nayo ibizwa ngeTungsten Carbide Blank Boring Bar Factory, engakha ibha ye-tungsten carbide eyisicefe ngezimo ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ukwakhiwa kwe-Carbide:Ngaphandle kwezikhala ze-carbide, iToonney nayo yenza okunye ukusetshenziselwa imishini ezindaweni ezingenalutho futhi inikeze ama-preforms ahlukahlukene ngokuya ngemfuneko ehlukile yekhasimende. Ukuma njengoba kudingeka ikhasimende, nobukhulu, imininingwane eqhubekayo yokwenza imininingwane eyenza ukuthi i-carbide ingabi nalutho eduze kwemikhiqizo eseqedile ikhasimende elifuna ukuthola kuyo.
I-Toonney Precision Tools Factory inamamaki angama-50 ahlukene we-tungsten carbide material ngobubanzi obuhlukile, ubude nobukhulu. Ngemuva kwalokho sisebenzisa amafomula ahlukile ukuhlangabezana nanoma iziphi izidingo ezikhethekile ezingekho ohlwini (sinohlu olufanayo lwamathuluzi wokunemba wamakhasimende angezansi)
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane nge-tungsten carbide yethu engenalutho, ibha eyisicefe ye-carbide, i-carbide eyenza, namanye amathuluzi wokunemba.
Okufakiwe Yekuchumana: Isikhwama sepulasitiki, bese sivikelwe ngendwangu ye-foam, ekugcineni ebhokisini elingaphandle.
Izindaba Zezibonelo:I-Tungsten carbide ingenalutho engatholakala kuhlu lwethu olujwayelekile olujwayelekile, inganikezwa njengamasampula mahhala. Kwenye ibha ye-tungsten carbide eyisicefe nebha enesimende enamakhasimende akhethekile angafuneki, izokhokhiswa. Vele, amakhasimende adinga ukukhokhela imali yokuthumela. Imvamisa, isikhathi sokuhola samasampuli sizoba phakathi kwezinsuku ezingu-7 zisebenza
Ubuncane be-oda Ubuningi:Abukho ubuncane be-oda obuncane be-tungsten carbide engenalutho noma ibha eyisicefe ye-carbide ye-oda lokuqala lesilingo. Kepha ku-oda lesibili, inani eliphelele le-tungsten carbide elingenalutho ne-barboring boring bar akufanele libe ngaphansi kuka-1000USD.
Isikhathi sokuthumela: Izinsuku 7-15 zokusebenza
Ibanga Ibanga le-ISO ICobalt Usayizi wezinhlamvu Ubuningi Ubulukhuni Ubulukhuni TRS
TU06 I-K05-K10 6.0 0.4 14.80 94.0 2177 3800
TF06 I-K05-K10 6.0 0.6 14.81 93.1 2037 3600
TU08 I-K10-K20 8.0 0.4 14.52 93.5 2099 3800
TU40 I-K20-K40 10.0 0.8 14.40 91.8 1834 3800
TU40F I-K20-K40 10.0 0.6 14.45 92.3 1912 4000
TU44 I-K20-K40 12.0 0.4 14.10 92.8 1990 4200
TU25 I-K20-K40 12.0 0.5 14.06 92.5 1943 3800
TU45 I-K20-K40 13.0 0.4 13.96 92.6 1959 4000
Incazelo nayo ingenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Igama lomkhiqizo: I-Tungsten carbide engenalutho / ibha eyisicefe yeCarbide
Inombolo imodeli: TC
Uhlobo: I-Tungsten carbide engenalutho / ibha eyisicefe yeCarbide
Ibanga: I-TU06, TF06, TU08, TU40, TU40F, TU44, TU25, TU45
1. TU06 Tungsten carbide blank (Ubuningi be-tungsten carbide blank blank: 14.8; HRA ye-tungsten carbide blank blank: 94)
Kukulungele ukwenza i-PCB microdrilling, i-micro milling cutter nezinhlobo zamathuluzi aqinile wensimbi. Ncoma impahla ukwenza milling umsiki zazo Dia. ingu-1.2mm nangaphezulu.
2. TF06 Tungsten carbide blank (Ubuningi be-tungsten carbide blank blank: 14.81; HRA of tungsten carbide blank blank: 93.1)
Ilungele ukusika i-aluminium ne-magnesium alloy, i-copper base alloy, i-iron-base alloy, ipulasitiki, i-graphite, i-carbon fiber njll. Izinto eziphindwe kabusha zokwenza i-drill kanye ne-mill cutter ye-aluminium ne-magnesium material.
3. TU08 Tungsten carbide blank (Ubuningi be-tungsten carbide blank blank: 14.52; HRA yezinto ze-tungsten carbide ezingenalutho: 93.5)
Amandla aphezulu nobulukhuni, kuhle ukwenza imishini impahla ye-acrylic, okwe-oda kabusha okwenza i-PCB drill ne-drill enkulu okuyi-dia kuyo. Ingu-0.7mm nangaphezulu.
I-TU40 tungsten carbide blank (Ubuningi bezinto ezingenalutho ze-tungsten carbide: 14.4; i-HRA yezinto ze-tungsten carbide ezingenalutho: 91.8)
Izinto ezi-odolwe kabusha zokubhola ezivamile, isigayo sokuphela, okuhle kakhulu ukugaya nokubhoboza impahla ejwayelekile yensimbi, impunga yensimbi, insimbi yase-Austenit ne-alloy.
5. TU40F Tungsten carbide blank (Ubuningi be-tungsten carbide blank blank: 14.45; HRA ye-tungsten carbide blank blank: 92.3)
Izinto eziphindwe kabusha zokwenza i-drill, i-milling cutter njll, ukugaya nokubhola insimbi, insimbi engagqwali, insimbi yensimbi ne-aluminium alloy lapho ubunzima bayo bungaphansi kwe-50HRC.
6. TU44 Tungsten carbide blank (Ubuningi be-tungsten carbide blank blank: 14.1; HRA ye-tungsten carbide blank blank: 92.8)
Kufanelekile ukwenza izinsimbi ezahlukahlukene zokugaya, i-reamer, ama-blade blades njll ngokukhethekile yenza okuhle kumathuluzi okusika ngejubane elikhulu ngokwesibonelo ekusikeni insimbi ecinyiwe, i-aluminium alloy, i-titanium alloy njll.
7. TU25 Tungsten carbide blank (Ubuningi be-tungsten carbide blank blank: 14.06; HRA ye-tungsten carbide blank blank: 92.5)
Okokusebenza kwamathuluzi okusila kanye ne-drill ekwenzeni imishini yensimbi yokwelapha ukushisa, insimbi yensimbi, insimbi engagqwali.
8. TU45 Tungsten carbide blank (Ubuningi be-tungsten carbide blank blank: 13.96; HRA yezinto ze-tungsten carbide blank blank: 92.6)
Izinto eziphinde zalalelwa kabusha zazo zonke izinhlobo zokugaya ukuphela, i-reamer, i-blade blade njll, yenza kahle endaweni yokusika ukukhanya okusheshayo, efanelekile ngokukhethekile insimbi ecishiwe, i-aluminium alloy, i-titanium alloy njll.
1. Ikhwalithi ephezulu: I-Tungsten carbide material inezincazelo ezihlukile: ehlukile ngogqinsi, gqoka ukumelana nokushaqeka ukumelana.
2. Impilo yesevisi ende: Amathuluzi okunemba kaTonney anempilo ende yokusebenza.
3. Intengo yomkhiqizi:Umkhiqizi wamathuluzi wokucacisa iTonney ubuye abe isitshalo esidumile sendawo se-carbide esingenalutho. Ngakho-ke kunezinqubomgomo ezithile ezisekela uhulumeni, khona-ke amakhasimende angathola "intengo yomkhiqizi".
Ukulethwa okusheshayo:Ifektri yamathuluzi wokucacisa weTonney inethimba ledizayini eliqeqeshiwe nezinga elikhulu lokukhiqiza. Ukulethwa isikhathi sethu izinsuku 7-15.
5. Ukuvikelwa kwemvelo: ubumsulwa ngaphandle kwezinto ezenziwe kabusha
Langaphambilini Izinduku zeCarbide
Olandelayo: Ukudweba Die